Fanondranana harem-pirenena : Zana-tsokatra miisa 30 saron’ny zandary -
AccueilSosialyFanondranana harem-pirenena : Zana-tsokatra miisa 30 saron’ny zandary
Fanondranana harem-pirenena : Zana-tsokatra miisa 30 saron’ny zandary
16/08/2017 admintriatra Sosialy 0
Zana-tsokatra “radiata” miisa telopolo no tra-tehaky ny zandary, tao anaty fiara fitateram-bahoaka tany Ampanihy, ny faran’ny herinandro lasa teo.Vehivavy no nitondra sy nahatrarana ireo harem-pirenena ireo, ary nokasaina haondrana any Toliara ireo harem-pirenena ireo , izao saron’ny mpitandro filaminana izao. “Teo am-panaovana fisafoana ny toerana fitobian’ny fiara mpitatitr’olona ireo zandary no nahatsikaritra fihetsika hafahafa tamin’io vehivavy io. Nisy ihany ihany koa ny fanomezam-baovao avy amin’ny olona tsara sitrapo, izay nanambara fa mpanondrana sokatra io olona io, ka rehefa natao ny fisavan, dia nahitam-bokany tokoa”, hoy ny fanamarinam-baovao voaray. Nogiazana avy hatrany moa ireo zana-tsokatra ireo, ary nosamborina nentina nanaovana fanadihadiana tany amin’ny biraon’ny zandary ihany koa ny tompon’entana. “Tsy nety nilaza ny olona saika handefasany ireo biby ireo izy, ary nolazainy tsotsotra fotsiny fa hatao fanomezana izany”, hoy hatrany ny fanampim-panazavana.
Ankoatra ny volamena dia isan’ny harem-pirenena be mpanondrana indrindra ihany koa ny sokatra, ary ity karazany iray antsoina hoe “radiata” ity no tena lasibatra amin’izany. Efa misy mihitsy ny olona na ny orinasa vahiny mandray ity biby ity rehefa tonga any ivelany, ary efa misy tambazotra mihitsy mpanao io fanondranana antsokosoko io ihany koa eto amintsika. Ireo sokatra tratra eny amin’ny seranam-piaramanidina Ivato ihany koa matetika dia taterina amin’ny alalan’ny taksiborosy avy any amin’ny faritra, ary olon-kafa indray no mamoaka azy any ivelany avy eo. Tsara ho marihina fa azo hatao tsara no manondrana ireo harem-pirenena eto an-toerana, saingy misy taratasy karakaraina sy misy vola aloa any amin’ny kitapom-bolam-panjakana mba ahatonga izany ho ara-dalàna. Sazy henjana kosa no miandry ireo izay minia mandika lalàna. Amin’ny tranga tahaka izao, dia samy manao fitanana an-tsoratra ny eo anivon’ny zandarimariam-pirenena sy ny tompon’andraikitra amin’ny Rano sy Ala. Hatolotra ny “centre de réeducation” ireo sokatra ireo, alohan’ny hamerenana azy any amin’ny natiora.